Na netwọk LAN 192.168.8.100 bụ IP. Ọtụtụ ndị mmadụ enweghị ike ịchọta ụzọ nbanye nke eriri ikuku wireless intranet WIFI. Nwere ike ịnwale ịpị njikọ ahụ: https://192.168.8.100 nbanye n'ime nchịkwa interface. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịgbakwunye, ị nwere ike izo aka na nchịkọta akụkọ nbanye njikwa. Ọ bụrụ na ịchefuru aha njirimara na okwuntughe gị, lee anya na akara ma ọ bụ akwụkwọ ntuziaka nke rawụta.
Adreesị IP eji 192.168.8.100, otu esi eji ya?
Izizi, kwalite ọpụrụiche akọwapụtara nke adreesị IP. Edebara adreesị IP n'ime ụdị ABCDE 5, n'etiti ABC na-ejikarị. N'ime ụdị adreesị 3, otu adreesị echekwara adreesị, na enweghị ike iji ngwugwu nwere adreesị ndị a. Ozugbo agbasa na net, IP bụ adreesị echekwara na adreesị klas C, nke a na-ejikarị na netwọk LAN, ihe nkpuchi subnet nke adreesị C bụ 255.255.255.0, na-akọwapụta na adreesị klas C nwere ike ịnabata 256 IPs O doro anya, yana otu onye na-ahụ maka ntanetị, enwere ọbụna otu onye na-anọchite anya ya. Naanị 254 ka enwere ike ịhọpụta onye ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, onye ọrụ IP nke netwọk 192.168.1.0 nwere ike ịbụ site na 1-254. Mmekọrịta dị n'etiti ha achọghị ka ịnyagharịa rawụta. Kpọmkwem faịlụ a pụrụ.
Iji kwuo, echiche nke adreesị IP a zuru oke. Ebe ọ bụ adresị echekwara, ọ na-egosi na enwere ike iji ya na LAN kwa. Nọmalị, a na-eji ya dị ka onye ọrụ IP, dị ka IP site na mantissa nke .1 bụ n'ozuzu ya na-edebe ya maka ụzọ mbata, ya mere ekenye onye ọrụ 192.168.1.2-192.168.1.254. Ọ bụrụ na na LAN enwere ihe nkesa DHCP, ịnwere ike ịtọ otu adreesị IP ahụ na 192.168.1.2-192.168.1.254. Edemede a na - edozi adreesị IP na - akpaghị aka maka onye ọrụ.
Ihe dị iche bụ ihe eji eme ihe ikuku na-ejikarị ụbọchị ndị a. Nọmalị, IP LAN n'ọdụ ụgbọ mmiri nke ụdị ngwá ọrụ a na-enwekarị mantissa nke .1. A na-atụ aro ka ndị ahịa gbanwee ọdụ ụgbọ mmiri LAN IP na adreesị ọzọ, ka ndị ahịa ndị ọzọ ghara ịkọ nkọ. Gaa na IP ọdụ ụgbọ mmiri LAN ọdụ ụgbọ mmiri dịka ọmụmaatụ, IP bụ oke nhọrọ. N'ụzọ doro anya, enwere ike ịtọ IP ọdụ ụgbọ mmiri IP, ọ dịghịkwa mkpa ịhọrọ IP site na iji ngalaba ntanetị mbụ. IP nke ngalaba netwọkụ dị iche iche ezoro ezo & nchebe; Otú ọ dị, ị kwesịrị iburu n'uche ịgbanwe ụzọ ntinye nke onye ọrụ na nke kwekọrọ na ya, ọzọ ọ gaghị ama otu esi ejikọta na netwọk ahụ.
Ole na ole obere ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ na-achọkarị ka a setịpụrụ na adreesị IP, na ojiji na-esote IP iji jiri ụlọ ọrụ ma ọ bụ usoro ụlọ akwụkwọ niile nweta ụgbụ. Adreesị IP nke ndị ọrụ nke ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ dị otú ahụ tinye n'ọrụ bụ intranet IP.
Ekwesịrị ịkọwa ya na PC dị na netwọkụ dị n'ime nwere ike izipu arịrịọ njikọta na PC ndị ọzọ na netị, PC dị iche iche na ịntanetị enweghị ike izipu arịrịọ njikọta na PC na netwọkụ dị n'ime ya n'ihi sava FTP na ntanetị.